Sawirada sida Garowe looga xusay 1-da Augusto. (Daawo+dhagayso) – Radio Daljir
Agoosto 2, 2013 12:33 b 0
Garowe,August, 02, 2013 – Munaasabadaan lagu maamuusayay sanad-guuradii 15-aad ee kasoo wareegtay aas aaskii Putland oo ka dhacday qasriga madaxtooyadda Puntland ee Garowe ayaa waxaa kasoo qaybgalay madaxda Puntland oo ay wehliyaan goleyaasha dawladda, saraashiisa ciidanka, qaar ka mid ah issimada Puntland, aqoonyahanno, siyaasiyiin, ururada bulshada riyadka ah iyo madax ka socotay hay?ado caalami ah.
Munaasabadaan oo ahayd mid qaybaheedii hore ay kooxda fanka Waabari Puntalnd ay ku soo bandhigeen heeso ay ku matalayaan wacyiga jira iyo waayaha lasoo maray, riwaayado xambaarsan fariimo ka turjumaya dareen-wadaniyad, iyo majaajilooyin daahsoon oo loogu duur-xulayo marxaladda siyaasadeed ee Puntland, ayaa waxaa xiggay khudbado ay madasha ka jeediyeen qaar ka mid ah golaha xukuumadda oo madasha kusoo bandhigay mudadii ay xukuumaddu jirtay waxyaabihii u qabsoomay iyo caqabada jiraba.
Issimada Puntland qaar-kood xafladda ka hadlay ayaa si qoto dheer waxay u hogotusaaleeyeen marxaladda siyaasadeed iyo doorka dhaqanka, waxaana issimadii goobta ka hadlay ka mid ahaa Islaan Ciise Islaan Maxamed oo ka mid ah Issimada facawayn ee magaca ku leh Puntlnad iyo Soomaaliyaba, waxaana Islaan Ciise shacabka Puntlnad uu ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga Puntland, isagoo hadalkiisa siiwata ayuu shacabka iyo xukuumaddaba Islaanku waxaa uu ku ammaanay go’aankii 14-kii June lagu joojiyay doorashooyinka goleyaasha deegaanka Puntland.
Madaxwaynaha dawladda Puntland oo madasha ka jeediyay khudbad qaatay ?60 daqiiqo ayaa khudbadiisa diirada ku saaray arrimo badan oo ay ka mid yihiin, go?aanka dawladda ee doorashooyinka baarlamaaniga ah, xiisadihii 14-Jun ka dhacay Puntlnad,? wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya, xiriirka Putland iyo Federaalka, Dastuurka Soomaaliya, ?siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirka beesha caalamka iyo arrimo kale oo badan.
Gabagabadii munaasabadda ayaa madaxwayaha Putnland Dr C/raxmaan Sh. Maxamed Maxamuud Faroole waxaa shihaado sharaf guddoonsiiyay dad gaar ah oo uu ku tilmaamay inay doorwayn ka qaateen hormarinta Puntland, waxaana ka mid ahaa dadkii uu madaxwaynuhu xusay AU Dr Cabdi Xassan Jimcaale oo sanadkii hore ku geeryooday dalka dibaddiisa.
Xuska 15-guurada Puntland oo siyaabo kale duwan looga xusay dhammaanba magaalooyinka Putland iyo daafaha dunnida ayaa kusoo beegmaya xilli guud ahaanba deegaannada Puntlan ay ka socdaan shirar looga golleeyahay soo xulida xubanaha baarlamaanka cusub ee Puntlnad.
Warbixin: Dugsiga Dangoroyo oo ka guulaystay dugsiga Mubaarak ee Dhahar